Kulankii Kalfadhiga 47-aad ee UNECE Qaybta Gaarka ah ee Khudradda baradhada - PotatoSystem
Kulan Kalfadhiga 47-aad ee UNECE Qaybta Gaarka ah ee Khudradda baradhada
Sawir laga soo qaaday goobta Xarunta Beeraha ee Ruushka
Bishii Juun 25 iyo 26, 2020, kulan internet ah oo ka kooban afartan iyo afartan kalfadhiga qaybta gaarka ah ee ku saabsan horumarinta heerarka baradho abuurka ah ee Komishanka Dhaqaalaha Qaramada Midoobay ee Yurub (UNECE) ayaa ka dhacay.
Xusuusnow kulanka wuxuu ahaa in lagu qabto Maarso 16-17, 2020 magaalada Geneva, laakiin dib ayaa loogu dhigay cudurkan faafa ee COVID-19.
Wakiilo ka kala socda Finland, Poland, Russia, North America, South Africa, Netherlands, Germany, Estonia, Sweden, Switzerland, Portugal, Austria, Belgium, France iyo kuwa kale ayaa ka qeyb qaatay kulanka khadka tooska ah.
Laga soo bilaabo Xiriirka Ruushka, agaasimaha FSBI Xarunta Beeraha Ruushka A.M. ayaa ka qeyb qaatay fadhiga. Malko, shaqaalaha xafiiska dhexe iyo shaqaalaha waaxda FSBI "Rosselkhoztsentr" ee Gobolka Leningrad, oo uu madax u yahay madaxa laanta, E.A. Pavlova. Maalintii ugu horreysey, wakiilka UNECE Mika Vepselainen wuxuu jeediyay khudbad soo dhaweyn ah wuxuuna qeexay xaalada adag ee adduunka ka jirta oo ka dhaceysa masiibada COVID-19.
Xoghayaha Qaybta, Madaxa Qeybta Heerarka Beeraha ee UNECE Liliana Annovazi-Jacob ayaa uga mahadcelisay qof walba shaqadooda kooxda.
Abaabulaha kulanka kulanka internetka wuxuu ahaa Hanna Kortemaa (wakiilka Finland).
Naina Zidek, Wakiilka Waqooyiga Ameerika, wuxuu ka hadlay booqasho ay ku yimaadeen Kooxda Montato State Potato Team ee Sanadka 2019. Kulanku wuxuu ahaa mid faaiido badan leh. Waxaan booqannay soosaarayaasha abuur baradho ah, waxaanna aqoon u leenahay shaqada shaybaarka ee baaritaanka cudurrada baradhada abuur, soo saarista dhirta yar yar, iyo caddeyntii baradhada abuur.
Waxaa kaloo looga hadlay arrimaha soo socda:
1) Wax ka badalida heerka halbeega baradhada ee ay soo gudbiyeen wakiilada Finland:
1. Qalabka isha waa inuu lahaadaa daahirnimo noocyo kala duwan leh oo u dhigma.
2. baradhada abuurkan waa in laga helaa si rasmi ah oo la ansixiyay abuur bilow ah oo aan ugu yaraan saameyn loo yeelan:
- digriiga curdanka leh 'viroid' oo leh sharoobadda qaabeeya;
- clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus (giraan isku wareejin);
-ralstonia solanacearum (kallani bunni ah);
- pectobacterium spp. iyo Dickey spp. (син. erwinia spp.);
- fayrasyada baradho X, Y, S, M iyo A;
- Fayruus caleemo baradho oo maroojin ah.
2) Tilmaamaha dib loo eegay ee waxsoosaarka miinada. Waxaa soo gudbiyey Australia.
Ahmiyada waxsoosaarka dhirta micro iyo macdanta baradho waxay hubineysaa in walxaha la soo saaray:
- hayn doona aqoonsiga noocyada kala duwan, daahirsanaanta noocyada kala duwan iyo isku-duwanaan kaladuwan;
- ka xor ahaa cayayaanka iyo cudurada;
- Bixinta raad raac ee asalka badeecada.
3) Daraasad xogwarays ah oo dib loo eegay oo ku saabsan hababka baaritaanka bakteeriyada. Dukumiinti ay diyaariyeen wafdi ka socda Mareykanka ee Mareykanka. Su'aalaha ayaa la soo saaray:
- cabir fara badan oo baradho abuur ah;
- tijaabinta digriiga fayraska.
4) Deganaanshaha dhaqanka unugyada iyo casriyeynta noocyo.
Dukumiinti ay diyaarisay wefdiga Koonfur Afrika.
- Xaaladaha oo dhan, si loo cusbooneysiisto ama loo beddelo noocyada kala duwan ee la soo dejiyo, waxaa aad u wanaagsan in lala xiriiro shirkadda taranka iyadoo la codsanayo in la bixiyo muuqaal cusub. Si kastaba ha noqotee, kiisaska loo baahdo casriyeyn kaladuwan, dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah waa in la qaataa si loo yareeyo halista la xiriirta cusboonaysiinta isku-xirnaanta;
- 13 marxaladood oo qalabka cusboonaysiinta:
1. Aqoonsiga goob ku habboon iyo walxo beero oo ku habboon.
2. Qiimaynta goobta koowaad iyo xulashada.
3. Qiimaynta labaad ee duurka iyo xulashada.
4. Baadhitaannada caleenta fayraska.
5. Goynta digriiga.
6. Qiimaynta digriiga.
7. Xulashada saacadaha.
8. Beerista iv vitro.
9. Imtixaanno loogu talagalay bakteeriyada.
10. Imtixaannada fayraska.
11. Qiimeynta geedo ku jira iftiinka deegaanka.
12. Baadhitaanka DNA.
13. Ansixinta iyo wareejinta adeegsiga muraayadaha la xushay.
5) Dhamaadka kalfadhiga, Ergeyga ka socda Jarmalka wuxuu soo bandhigayaa hage awood-dhisid awoodeed oo dib loo eegay.
- Hagahan ayaa hadafkiisu yahay in la bixiyo hannaan tababar oo dhameystiran oo loogu talagalay in lagu isticmaalo mashaariicda awoodda-dhisidda oo ballaaran ama iyada oo qayb ka ah qaybaha shaqsiyaadka loogu talagalay tababar diiradda saaraya.
Koorsada tababarka ayaa laga yaabaa inay daboosho mowduucyada soo socda:
- Shuruudaha ugu yar ee ay tahay in laga gaadho soosaarista baradhada loogu talagalay diyaarinta abuur baradho waaweyn-TK. (Xusuusin: waxay ku habboonaan kartaa oo keliya marxalad dambe).
- Shuruudaha ugu yar ee soo degitaanku waa inuu buuxiyaa.
- Qaababka kormeerka gudaha.
- Is dulqaadasho la'aanta cilladaha iyo cudurada ku jira dufanka baradhada abuur.
- Sii dulqaadasho la'aan.
- Nidaamka kormeerka tubbada
- Shuruudaha ugu yar ee farcanka tooska ah ee baradho farcanku ay tahay inay qanciyaan.
- Nidaamyada xakameynta goosashada ka dib.
- Shaxda dulqaadashada oo kooban.
Dhamaadka fiidiyowga, meesha iyo taariikhda kulanka dambe ee Qaybta ayaa laga wada hadlay.
Bisha Maajo 20-21 ama bilowga bisha Juun 2021, Shirka Caalamiga ah ee baradhada adduunka ayaa la qorsheeyay, iyadoo ku saleysan helitaanka lacagaha. Dalka ayaa go'aan ka gaari doona mustaqbalka dhow.
Soojeedin ayaa loo soo diray si loogu biiro qaybta caadiga ah ee horumarinta Koongareeska.
Casharka kan xiga waxaa loo qorsheeyay deyrta 2020.
Source: Xarunta beeraha Ruushka
Tags: United Nationshorumarinta heerarka baradhada abuurОссельхозцентр